1 Mpanjaka 16 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Mpanjaka Voalohany 16:1-34
Nanameloka an’i Basa i Jehovah (1-7)
Elaha, mpanjakan’ny Israely (8-14)
Zimry, mpanjakan’ny Israely (15-20)
Omry, mpanjakan’ny Israely (21-28)
Ahaba, mpanjakan’ny Israely (29-33)
Nanorina indray an’i Jeriko i Hiela (34)
16 Ary niteny tamin’i Jeho+ zanak’i Hanany+ i Jehovah, ka nanameloka an’i Basa hoe: 2 “Nasandratro avy tamin’ny vovoka ianao ary nataoko mpitarika ny Israely vahoakako.+ Mbola nanao hoatran’ny nataon’i Jeroboama ihany anefa ianao ary nahatonga ny Israely vahoakako hanota, ka nampahatezitra ahy izy ireo noho ny fahotany.+ 3 Koa hofongorako tanteraka i Basa sy ny ankohonany, ka hataoko hoatran’ny ankohonan’i Jeroboama+ zanak’i Nebata ny ankohonany. 4 Izay rehetra an’i Basa ka maty ao an-tanàna dia hohanin’ny alika, ary izay rehetra azy ka maty any an-tsaha dia hohanin’ny voro-manidina.” 5 Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Israely ve ny sisa amin’ny tantaran’i Basa, izany hoe izay nataony sy ny heriny? 6 Dia nodimandry any amin’ny razambeny i Basa, ka nalevina tao Tirza.+ Ary i Elaha zanany no nanjaka nandimby azy. 7 Tamin’ny alalan’i Jeho mpaminany zanak’i Hanany koa i Jehovah no nilaza ny fanamelohany an’i Basa sy ny ankohonany. Nomelohina izy ireo noho ny ratsy rehetra nataony teo imason’i Jehovah, dia ny nanaovany izay hampahatezitra Azy toy ny nataon’ny ankohonan’i Jeroboama. Nomelohina koa izy ireo noho ny namonoany an’i Nadaba.+ 8 Tamin’ny taona faha-26 nanjakan’i Asa mpanjakan’ny Joda, no lasa mpanjakan’ny Israely tao Tirza i Elaha zanak’i Basa. Ary nanjaka roa taona izy. 9 Nanao tetika hamelezana azy i Zimry mpanompony, izay lehiben’ny antsasak’ireo miaramila mpitondra kalesiny. Tao Tirza i Elaha tamin’izay ary nisotro be ka mamo tao an-tranon’i Arza, izay niandraikitra ny ankohonan’ny mpanjaka tao Tirza. 10 Dia niditra i Zimry ka namono+ an’i Elaha ho faty tamin’ny taona faha-27 nanjakan’i Asa mpanjakan’ny Joda. Ary i Zimry no nanjaka nandimby an’i Elaha. 11 Raha vao nanjaka i Zimry ka nipetraka teo amin’ny seza fiandrianany, dia novonoiny daholo ny ankohonan’i Basa. Tsy nasiany niangana na iray aza ny lehilahy,* na havany* io na namany. 12 Naripak’i Zimry daholo àry ny ankohonan’i Basa, araka ny teny nolazain’i Jehovah tamin’ny alalan’i Jeho mpaminany tamin’Izy nanameloka an’i Basa.+ 13 Nitranga izany noho ny fahotana rehetra nataon’i Basa sy Elaha zanany, ary noho ny fahotana nataon’ny Israely noho ny fitaoman’izy mianaka. Nampahatezitra an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely mantsy izy ireo noho ny sampy tsy misy dikany notompoiny.+ 14 Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Israely ve ny sisa amin’ny tantaran’i Elaha, izany hoe izay rehetra nataony? 15 Tamin’ny taona faha-27 nanjakan’i Asa mpanjakan’ny Joda, no lasa mpanjaka tao Tirza i Zimry. Ary nanjaka fito andro izy. Nitoby mba hiady tamin’i Gibetona,+ izay an’ny Filistinina, ny tafika tamin’izay. 16 Tatỳ aoriana, dia henon’ny miaramila tao amin’ny toby hoe: “Nanao tetika hamelezana ny mpanjaka i Zimry, dia namono azy.” Nifidy an’i Omry+ lehiben’ny tafika àry ny Israely rehetra tao an-toby tamin’iny andro iny, mba hatao mpanjakan’ny Israely. 17 Dia niakatra avy tany Gibetona i Omry sy ny Israely rehetra, ka nanao fahirano an’i Tirza. 18 Rehefa hitan’i Zimry fa azon’izy ireo ilay tanàna, dia niditra tao amin’ny tilikambo voaro mafy, izay anisan’ny tranon’ny* mpanjaka, izy. Ary nodorany ilay trano ka maty kilan’ny afo tao izy.+ 19 Nitranga izany noho ny fahotana nataony, tamin’izy nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah ka nanahaka an’i Jeroboama, sy noho ny fahotana nataon’ny Israely noho ny fitaomany.+ 20 Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Israely ve ny sisa amin’ny tantaran’i Zimry sy ny teti-dratsy nataony? 21 Tamin’izay no nizara roa ny vahoakan’Israely. Ny iray nanohana an’i Tibny zanak’i Ginata satria te hanao azy ho mpanjaka, ary ny iray nanohana an’i Omry. 22 Resin’ny mpomba an’i Omry anefa ny mpomba an’i Tibny zanak’i Ginata. Dia maty i Tibny, ary lasa mpanjaka i Omry. 23 Tamin’ny taona faha-31 nanjakan’i Asa mpanjakan’ny Joda, no lasa mpanjakan’ny Israely i Omry. Ary nanjaka 12 taona izy, ka tao Tirza ny 6 taona. 24 Novidiny tamin’i Samera ny tendrombohitr’i Samaria, ary volafotsy roa talenta* no nahazoany azy. Dia nanorina tanàna teo amin’ilay tendrombohitra izy. Nataony hoe Samaria*+ ny anaran’ilay tanàna, araka ny anaran’i Samera tompon’ilay tendrombohitra. 25 Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah foana i Omry, ary nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra talohany.+ 26 Nanao hoatran’izay rehetra nataon’i Jeroboama zanak’i Nebata izy. Nataony koa ny fahotana nataon’ny Israely noho ny fitaoman’i Jeroboama, tamin’izy ireo nampahatezitra an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely noho ny sampy tsy misy dikany notompoiny.+ 27 Ary tsy efa voasoratra ao amin’ny boky mirakitra ny tantara tamin’ny andron’ireo mpanjakan’ny Israely ve ny sisa amin’ny tantaran’i Omry, izany hoe izay nataony sy ny heriny? 28 Dia nodimandry any amin’ny razambeny i Omry, ka nalevina tao Samaria. Ary i Ahaba+ zanany no nanjaka nandimby azy. 29 Lasa mpanjakan’ny Israely i Ahaba zanak’i Omry tamin’ny taona faha-38 nanjakan’i Asa mpanjakan’ny Joda. Ary nanjaka 22 taona teo amin’ny Israely, tao Samaria,+ i Ahaba zanak’i Omry. 30 Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah, mihoatra noho izay rehetra talohany,+ i Ahaba zanak’i Omry. 31 Hoatran’ny hoe tsy ampy azy ny nanao ny fahotana nataon’i Jeroboama+ zanak’i Nebata, fa mbola nanambady an’i Jezebela+ zanakavavin’i Etibala mpanjakan’ny Sidonianina+ koa izy. Ary lasa nanompo an’i Bala+ izy ka niankohoka teo anatrehany. 32 Dia nanorina alitara ho an’i Bala izy, tao amin’ny tranon’i* Bala+ izay naoriny tao Samaria. 33 Nanamboatra tsato-kazo masina*+ koa izy. Nanao zavatra maro nampahatezitra an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely i Ahaba, mihoatra noho ny mpanjaka rehetran’ny Israely talohany. 34 Tamin’ny andron’i Ahaba i Hiela Betelita no nanorina indray an’i Jeriko. Maty àry i Abirama lahimatoany rehefa nanao ny fototra izy, ary maty i Segoba faralahiny rehefa nanangana ny vavahadiny izy, araka ny tenin’i Jehovah tamin’ny alalan’i Josoa zanak’i Nona.+
^ Abt: “izay mipipỳ amin’ny rindrina.” Fomba fiteny hebreo fanambaniana ny lehilahy.
^ Na: “havany mpamaly ra.”
^ Na: “lapan’ny.”
^ 1 talenta = 34,2 kg. Jereo F.F. B14.
^ Midika hoe “An’ny Fokon’i Samera.”
^ Na: “tempolin’i.”